हिमाल खबरपत्रिका | विकृतिको विस्तार
आहा रारा गोल्ड कप, पोखरा (२०७५) ।
कारण थियो– प्रतियोगिताको अव्यवस्थित तालिका र ठूला क्लबहरूलाई नै खेलाउने आयोजकको चाहना । आयोजकहरू आफूले चाहेका क्लबलाई मात्र प्रतियोगिताको निम्तो दिने गर्छन् । विगतमा झैं यो वर्ष पनि नाम चलेका क्लबहरू, तीन वटा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी र एपीएफ क्लब तथा थ्रीस्टार, मनाङ–मस्र्याङ्दी र संकटा क्लब जिल्ला आयोजकहरूको रोजाइमा परे । फाट्टफुट्ट केही प्रतियोगितामा हिमालयन शेर्पा, च्यासल र सरस्वती क्लब परे, बाँकी चाहिं जिल्लास्तरीय टोली र केही विदेशी क्लब थिए ।
जिल्ला–जिल्लामा प्रतियोगिता भएको देखिए पनि सीमित क्लब र खेलाडी मात्र देश दौडाहामा निस्किने गर्छन् । देशभर फूटबल गतिविधि त भएका छन्, तर क्लब र खेलाडी तिनै हुन्छन् । फरक हुन्छ त ठाउँ मात्र । बाँकी क्लब र खेलाडी खेलविहीन छन् । कोही खेलाडीलाई आरामै आराम, कोही भने लगातार खेलिरहँदा प्रदर्शनको स्तर खस्कँदो छ । अझ गम्भीर के भने खेलाडीमा चोटको समस्या बढ्दा करिअर नै जोखिममा पर्न थालेको छ । थ्रीस्टार क्लबका प्रशिक्षक मेघराज केसी भन्छन्, “एक रात पनि आराम गर्न नपाएर खेल्दा कसरी खेलाडीको प्रदर्शन बढ्छ ? मलाई उपाधिको लोभभन्दा चोटको डरले सताउन थालेको छ ।”
धनगढीमा सम्पन्न खप्तड गोल्डकपका आयोजकले विजेतालाई रु.२१ लाख र उपविजेतालाई रु.१० लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरे । तर, पुस अन्तिम साता सम्पन्न प्रतियोगिताका विजेताहरूले अहिलेसम्म पुरस्कार पाएका छैनन् । मनकामना केबलकार पोखरा कपका विजेता दाउफिन्स र उपविजेता सशस्त्र प्रहरी बल अर्को उदाहरण हुन् । सशस्त्रका व्यवस्थापक अमित मल्ल भन्छन्, “एक महीना भइसक्यो, पुरस्कार पाएका छैनौं ।” (हे. बक्स)
पुरस्कार राशी घोषणामा आयोजकहरूबीच देखिने होडले अर्को विकृति निम्त्याएको छ । दर्शकले ठूला क्लब खोज्ने हुँदा आयोजकहरू ती क्लबलाई आकर्षित गर्न आफ्नो क्षमताले नभ्याउने पुरस्कार राशि घोषणा गर्छन् । दाउफिन्स जस्तो क्यामरुनको अनधिकृत क्लबले मौका पाइरहनुको कारण पनि त्यही हो । यसबाट एकातिर आयोजक नै समस्यामा परेका छन्, अर्कोतर्फ खेलाडीको सुविधा र स्तर वृद्धिमा ध्यान पुगेको छैन । स्तरीय मैदान, चुस्त व्यवस्थापन, खेलाडीको सुरक्षा र स्वास्थ्यमा अधिकांश आयोजक चुकेका छन् ।
तुलाधरका अनुसार, अर्को वर्ष हुने मोफसलका प्रतियोगिताहरूलाई नियन्त्रण गर्न एन्फा उपाध्यक्ष कृष्ण थापाको संयोजकत्वमा स्तर निर्धारण र व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ, जसले ती प्रतियोगिताहरूको स्तर वर्गीकरण गरी सहभागी हुने क्लबहरूबारे निर्णय गर्नेछ । जस्तो कि,‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका प्रतियोगिताहरूमा त्यही अनुसारका क्लबलाई सहभागी गराउनुपर्नेछ । क्लबहरूलाई लगातार खेल्नबाट रोक्न पनि मापदण्ड बनाइने तुलाधर बताउँछन् । अर्को वर्षको योजना पस्किसकेको एन्फाले यो वर्ष किन त्यसलाई लागू गरेन भन्नेबारे भने एन्फा पदाधिकारी मौन छन् ।
एन्फाका अनुसार यस वर्ष २३ वटा प्रतियोगितालाई स्वीकृति दिइए पनि त्यसभन्दा धेरै प्रतियोगिता सञ्चालन भए । प्रतियोगिताभन्दा पहिले खेलको नियम र सहभागी टोलीको सूची पठाउनुपर्ने एन्फाको निर्देशन कार्यान्वयन भएन । एन्फाले क्यामरुनको टोली दाउफिन्सलाई खेल्ने स्वीकृति नदिएको त बतायो, तर सहभागितामा रोक लगाएन । खेल अनुशासन र नियमको धज्जी उड्दा पनि एन्फा मूकदर्शक देखियो । जानकारहरू भन्छन्– प्रतियोगिताहरू अनिवार्य भए पनि उद्देश्यबाट टाढिंदै गएका ‘गोल्डकप’ हरूलाई समयमै नियमन गरिएन भने फूटबल विकासमै दीर्घकालीन बेफाइदा पुग्नेछ ।
१३ फागुनमा बुटवलमा सम्पन्न तिलोत्तमा गोल्डकपको २१औं संस्करण विजेता, क्यामरुनको दाउफिन्स क्लबलाई पुरस्कार दिने रकम आयोजकसँग थिएन । विजेतालाई पहिल्यै घोषणा गरिएको रु.८ लाख ८० हजार तथा उपविजेता लगायत अन्य खेलाडीलाई दिइने नगद पुरस्कारका लागि आयोजकले प्रतियोगिता चल्दाचल्दै सापटी खोजे । रु.६८ लाख खर्च भएको प्रतियोगितामा पुरस्कारवापत मात्र रु.१७ लाख ५५ हजार लागेको थियो । आयोजक रुपन्देही जिल्ला फूटबल संघका अध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी भन्छन्, “प्रायोजकको रकम उठ्न समय लाग्यो, इज्जतका लागि साथीभाइसँग सापटी खोजेर भए पनि पुरस्कार दियौं ।”
२७ माघमा पोखरामा सम्पन्न मनकामना केबलकार पोखरा कप फूटबल प्रतियोगिताका विजेता र उपविजेताले भने अहिलेसम्म पुरस्कार पाएका छैनन् । पोखरा कपको विजेता पनि दाउफिन्स क्लब नै हो । आयोजकले विजेतालाई रु.७ लाख ५५ हजार र उपविजेतालाई रु.४ लाख ५ हजार दिने घोषणा गरेका थिए । उपविजेता सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबका टीम म्यानेजर अमित मल्ल आयोजकहरूले एक साता कुर्न अनुरोध गरेको, तर एक महीनासम्म पनि पुरस्कार नपाएको बताउँछन् । विजेता दाउफिन्स क्लबका सगुन श्रेष्ठ भन्छन्, “दिन्छौं भन्नुभएको छ । विदेशी टोली पनि भएकाले यस्ता कुराको प्रचारले बाहिर नराम्रो सन्देश जाला भनेर हामीले चर्चा गरेका छैनौं ।”